i-engile yesengeli yegiya elincane kwesokunxele segiya le-gearbox elincane kwesokudla
umenzi wamagiya amancane egiya elingakwesokudla ngenani eliphakeme
Uyini Ukuchazwa Kwegiya Elilungile-Angle?
Bheka Izinhlobo ZamagiyaXhumana nathi
“Amabhokisi wamagiya angakwesokudla abonakala ngokuthi shaft yedrayivu kanye nomgodi wokukhipha kuhlelwe engxenyeni engama-90 degrees. Ngokuya ngohlobo lwebhokisi lamagiya, izimbazo zingahlangana ngendiza noma ziwele izindiza ezimbili ezifanayo, okuholela ekushayweni kwe-axis. ”1. I-worm gear drive yigiya elingakwesokudla njengoba linjalo ngegiya le-bevel. Ukushayela ku-inthanethi 2. Igiya elinamandla alingene emgqeni kodwa lingaba idrayivu engela kwesokudla
Bheka ukuthi sikunikeza ini
Siqamba amabhokisi wamagiya angama-torque aphezulu angaphezulu kwesokudla futhi ngamunye wabo unikeza umoya ophelele kumaphrojekthi amaningi wobunjiniyela njengokuphakamisa uhlelo, ukuxubana kwamalahle, amaphampu nokunye.
U-gearbox omncane we-angle ongakwesokudla nge-Crown Gears wotho wenziwa ngokudluliswa okuthembekile, nokonga kwejubane eliphezulu le-rpm noma amandla. Amanye angaba u-gearbox wama-engeli angakwesokudla one-reverse.U-gearbox o-engela ongakwesokudla e-india unokuphakama okuhlukile kusuka e-China futhi lezi zinciphisi zamagiya ezingama-90 ° ziyahlangana futhi zisebenza kahle, zisebenza ngokuthula zithule amagiya wentsimbi, ukudluliswa kwamandla kwe-engeli yangakwesokudla.
Ibhokisi le-gear gear elili-H ngakwesokudla elinomshini oqondile lixhunywe ngqo ne-mover prime efana nenjini yokuhlanganisa yangaphakathi, i-motor evundlile ne-turbine yegesi. Ngemuva kokuthi ijubane lehlisiwe (noma lenyuke), ukuphuma kwamandla kusuka kusheti ethe mpo. Ingakwazi ukumelana nokudonswa kwe-axial futhi isetshenziselwa ukudlulisela kanye nokushintshwa kwamaphampu wokujula kahle, amaphampu okugeleza kwe-axial, amaphampu wokugeleza we-diagonal, amaphampu amade shaft, amaphampu afakiwe neminye imishini ehlukahlukene yokuma shaft.
I-Cooling fan drive, u-gearbox omncane we-angle ongakwesokudla, u-gearbox ongu-torque ophakeme ongu-gearbox, u-gearbox oyi-angle oqondile, ukudluliswa kwamandla kwe-engeli engakwesokudla
Ibhokisi elincane le-bevel gear, i-angle eyi-bevel gearbox eyindilinga, i-spiral bevel gearbox, i-gearbox enkulu ye-torque ephezulu, ibhokisi le-bevel gear kabili, i-bevel gear drive
Ibhokisi lamagiya angakwesokunxele
igiya le-engile yesokudla yomshini wotshani, i-gearbox engenantanga, ibhokisi le-engela 1100 yangakwesokudla, i-tecumseh engenantanga
Ukupholisa u-gearbox wombhoshongo
Idrayivu yokupholisa umbhoshongo wezimboni, i-gearbox engeli engakwesokudla izindleko ezishibhile, i-gearbox yokushayela i-engeli yangakwesokudla
Ibhokisi lamagiya angle
Uhlobo lweplanethi, i-90 degree gearbox, i-angle engile yesibhakela eshibhile, isibuko segiya le-gear gear
Ibhokisi legiya le-bevel gear yangakwesokudla
i-angle engile yangakwesokunxele engezansi, i-gearbox ephezulu yangakwesokudla engu-rpm, ibhokisi eliphezulu lamagiya angakwesokudla
Uhlobo lwe-Bevel Gear, ukudluliswa kwamandla kwe-engeli engakwesokudla, u-gearbox omkhulu we-angle engakwesokudla, u-gearbox wombhoshongo wokupholisa
Ibhokisi lamagiya amancane angakwesokudla
Uhlobo lweBevel Gear, Ukuhanjiswa kwamandla ka-engeli yesokudla, ibhokisi lamagiya elikhulu lesokudla, isivinini esikhulu segiya lamagiya angama-90
I-angle engela engakwesokudla
i-gear minimer, shaft efakwe isivinini sokunciphisa isivinini, ibhokisi lama-300 hp kwesokudla kwegiya, isivinini sokunciphisa isivinini senjini kagesi
Ukupholisa ibhokisi likagiya labalandeli
I-Cooling fan gearbox, i-angle angle eshayela, i-gearbox ye-angle yangakwesokudla yezimboni, ama-driver we-Cooling fan
Ibhokisi lamagiya egiya langakwesokudla
Uhlobo lwegiya le-Worm, ukushayela okuncane kwe-angle, i-gearbox yangakwesokudla yezimboni, i-angle gear drive
Igiya lebhokisi lamagiya angakwesokudla lithengiswa kwaSogears Production
Amabhokisi wethu wamagear angakwesokudla nezinciphisi zejubane afaka i-state-of-the-art gearing esebenza kahle, enezinhlobonhlobo zokumiswa okwandayo nezesekeli ukulingana umshini wakho. Ngomklamo we-modular osuselwa endlini ye-cubic enamagiya womoya womoya nama-ratios kusuka ku-0.5 kuye ku-56: Amandla afinyelela ku-1 we-500 HP. Ingasetshenziswa kabanzi kumaphrojekthi wokonga amanzi, ubunjiniyela bakamasipala, izimayini zensimbi, uphethiloli, umlilo nobunjiniyela basolwandle neminye imikhakha.
Ngezinhlobo ezahlukahlukene zamamodeli nezilinganiso zokudlulisela, ingahlangabezana nezidingo zamandla okuhamba okuphezulu nesezingeni eliphansi kanye nemishini yokusebenza, kanye nekhono lokumelana ne-axial force, eyenza lula ukwakheka komshini osebenzayo. Ama-gearbox wama-H-Series angakwesokudla atholakala ezinhlobonhlobo eziningi zezicelo, ezingabizi kakhulu, ezonga isikhala futhi ezilungele izimo eziningi zezulu.
Ngeminye imibuzo sicela uxhumane nathi ngaleli fomu
Thumela Umbhalo Wakho